AC Milan oo ku raad joogta Jakub Jankto – Gool FM
(Milano) 30 Agoosto 2017 – AC Milan ayaa isha la raacaysa laacibka khadka dhexe uga dheela kooxda Udinese ee Jakub Jankto, balse waa inay marka hore iibisaa M’Baye Niang oo ay doonayso Torino.
Laacibkan caalamiga ah ee 21-jirka ah ee reer Czech Republic ayaa horraanba 4 kulan u saftay xulka dalkiisa ee wawaynka ah oo uu gool u dhaliyay, waa laacib dhexda ka ciyaara balse sidoo kale ka dheeli kara dadabka bidix ee weerarka maaddaama uu bidix yahay.
Sida ku qoran, hilinka Sportitalia, wakiilkiisa Giuseppe Riso, ayaa maanta 3 saacadood Casa Milan kula qaatay maareeyaha ciyaaraha Milan ee Massimiliano Mirabelli. Jankto oo akadamiyaha Udinese ku jirey tan iyo 2014 ayaa waxaa sidoo kale doonayay Juventus, Inter iyo dhowr naadi oo Premier League ah.
Yeelkeede, Milan waxay kaliya heshiis samayn kartaa marka ay iibiso Niang oo ay doonayso Torino.